PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-24 - EZEMISAKAZO:
Ilanga langeSonto - 2018-06-24 - Izindaba -
UMSAKAZO yimboni ephilayo nephilisayo ngokwemali kulabo abayingabazayo. Kakumnandi ukukhuluma indaba yemali ngoba kukhona abangenelisekile lapho bekhona nokubenza baguqukelwe yizinhliziyo, zibe mnyama bhuqe uma bezwa ngozakwabo abahola izindodla bebe bona bethola amakinati ekubeni kwenziwa umsebenzi ofanayo nangesikhathi esifanayo.
Baningi vele abangaqondi ukuthi ikhona ngempela imali la ikakhulukazi labo abangenamudla otheni ngezemisakazo. Khumbula phela ukuthi ezikoleni eziningi kawuzitholi nokuzithola izifundo ezisondelene nokwelulekwa nangamathuba akhona embonini yokusakaza.
Uze ukhanyiseleke kahle uma sekumele uye emabangeni emfundo ephakeme ukuthi konje kunemikhakha efana no- journalism, media studies, public relations and communications engakusondeza kule mboni.
Sizokhumbula futhi ukuthi phambilini bekungewona umkhakha onakekile lo njengoba nabebesebenza kuwo bebengafundile okutheni (namanje kusenjalo) okusondelene nayo le mboni. Bekugqanyiswa phambili ukuthi ngabe unalo na ikhono lokusakaza qha.
Namuhla nesikole sesibalulekile ngoba lezi zifundo nje engizibale ngenhla, zingakuvulela eminingi iminyango embonini yezokusakaza kodwa kakukhona lokho okubalulekile.
Indaba yemali ngiyivusa emuva komsindo osuke emuva kokuvela kwezindaba ezithinta urobert Marawa ngokumataniswa kwakhe neziteshi ezimbili zakwasabc